अध्यागमन अदालतको सुनुवाई डिसेम्बर ७ सम्म स्थगित, सयौं नेपाली प्रभावित « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अध्यागमन अदालतको सुनुवाई डिसेम्बर ७ सम्म स्थगित, सयौं नेपाली प्रभावित
न्युयोर्कको अध्यागमन अदालत लगायत अमेरिकाका अन्य कैयन अध्यागमन अदालतमा हिराशतमा नरहेकाहरुको सुनुवाई कम्तीमा डिसेम्बर ७ सम्म स्थगित भएको छ । एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले डिसेम्बर ४ सम्म नियमित सुनुवाई स्थगित गरेकोमा त्यसपछिको सप्ताहन्तका कारण कम्तीमा डिसेम्बर ७ सम्म स्थगित हुने भएको छ ।
As previously announced, certain immigration courts have resumed non-detained hearings. Hearings in non-detained cases at courts without an announced date are postponed through, and including, December 4, 2020.
— DOJ EOIR (@DOJ_EOIR) November 16, 2020
स्थगन मिति हरेक साता बढाइदै गएकाले त्यसपछि पनि स्थगन मिति बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । न्युयोर्कको भेरिक स्ट्रीट र फेडरल प्लाजामा रहेका अध्यामगन अदालतहरु हिराशतमा नरहेकाहरुको सुनुवाईका लागि कम्तीमा डिसेम्बर ७ सम्म बन्द रहनेछन् ।
अध्यागमन अदालतमा सुनुवाईहरु स्थगित हुँदा सयौं नेपालीहरु प्रभावित भएका छन् । बर्षौदेखि एसाइलमका मुद्दाको सुनुवाई कुरेर बसेका र परिवारसँग पुनर्मिलनको प्रतिक्षामा बसेका नेपालीहरु अदालत बन्द भएका कारण सुनुवाई पछाडि सर्दा मारमा परेका हुन् । कोरोनाको महामारी सुरु भएदेखि नै मार्चदेखि अध्यागमन अदालतहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
अध्यागमन अदालतमा हिराशतमा रहेकाहरुबाहेक अन्यको सुनुवाई हुन नसक्दा कैयन नेपालीहरु मारमा परेका छन् । एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युका अनुशार अमेरिकाका अध्यागमन अदालतहरुमा नेपालीहरुका ३९०९ केसहरु पेन्डिङ रहेका छन्, जसमध्ये ३८६७ केसहरु इमिग्रेशन सम्बन्धित रहेका छन् । १४ वटा केसहरुभने अपराधसँग सम्बन्धित रहेका छन् । इमिग्रेशनका नेपालीका पेन्डिङ केसहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै न्युयोर्कको फेडरल प्लाजामा १७०५ केसहरु रहेका छन् ।
न्युयोर्क राज्यका ४ वटा अदालतहरुमा नेपालीका पेन्डिङ इमिग्रेशन केसहरु २०५५ रहेका छन् ।